IKrismesi iyeza kungekudala. Le ayisiyiyo kuphela imini evuyisana nokuza konyaka omtsha, kodwa ikwayimini apho wonke umntu anikana izipho komnye nomnye kwaye evakalisa ukukhathazeka macala. Iinkqubo ezilinganiselweyo zeKrisimesi zamashishini ahlukeneyo ziya kulandela. Ungaliphosa njani eli thuba lihle kangaka?
Izipho zeKrisimesi, kuthetha ukumangaliswa, kuthetha okhethekileyo. Iimpawu ezininzi ziya kulisebenzisa eli thuba zichaze amaxesha ahlukeneyo eKrisimesi nangona kuyilo loyilo ekupakisheni. Nazi izinto zokupakisha zeKrisimesi ezithandwa ngamantombazana, kwaye mhlawumbi zinokukukhuthaza.
I-Starbucks idlale ukuthengisa ukupakisha iminyaka emininzi, kwaye le Krisimesi ayinjalo.
Ngo-2020, i-Starbucks yaphehlelela iziselo ezintathu zeKrisimesi, ezizezi, iToffee Hazelnut Latte, iLava Black Mocha kunye neTe Latte eLawulayo yeGolide.
Ikomityi yeKrisimesi yalo nyaka ibandakanya amaqhekeza ekhephu, iinkwenkwezi, kunye nezinto ezenziwa ngomlilo kuyilo, oluzisa umoya weKrisimesi owomeleleyo kwaye uzele ubuntwana. Ngendebe entsha kunye efanelekileyo, wonke umntu uyayithanda.
Ukongeza, i-Starbucks ikwasungule uthotho lweemveliso zepheripheriya ezinje ngezitshixo, iipendenti zeKrisimesi, iikeyiki zekrisimesi, njl.
Utshintsho ekupakisheni i-Starbucks lufezekisile ulindelo lwabantu lweKrisimesi kunye nokwanda komsebenzisi. Kukholelwa ukuba ingeniso ka-Starbucks kaDisemba izakubonisa ixabiso lentengiso lale phakheji.
2. umthandi omhlophe
UShiroi Koibito udume ngenxa yentsingiselo yothando, kwaye kwiKrisimesi, ikhetha umbala obomvu njengomxholo kwaye ibonise indawo yemidlalo yeKrisimesi ebhokisini. Okumangalisayo kukuba, ibhegi yokupakisha ikuki ikwimo ekhethekileyo yeKrisimesi. Esi sipho kubonakala ngathi sivela kuSanta Claus.
Ukupakisha kwe-M & M kuhlala kuyinto ehlekisayo, kwaye kulo nyaka, ukubhiyozela iKrisimesi, usapho lwe-M & M lubeka iminqwazi yaseSanta entloko.
IKrisimesi ayisiyiholide kuphela, kodwa ikwa lixesha elihle lokuba lonke uphawu lubhengeze. Ukupakishwa kwesi sihlandlo akunakubonakalisa kuphela ifashoni yeshishini, kodwa kukwazisa ukunyaniseka kweshishini kumthengi, kukonyusa ukuqonda komthengi ukuba ungubani.
Abanye abantu bahlala besithi ziimpawu ezinkulu kuphela ekufuneka zisebenzise imeko ukukhuthaza. Ngapha koko, imithendeleko lixesha elihle lokunyusa uphawu oluncinci. Kule mihla, ziimveliso ezilungileyo kuphela ezinokwazisa uluntu ezinokudlala indima yokuphindaphinda. Ukupakisha kwe-Beyin kunokubonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokupakisha ibhegi kunye neenkonzo zokuvelisa ukuhlangabezana neemfuno zomntu ngamnye ezisemgangathweni kunye nenkonzo.
Ukuba awuyifumani iKrisimesi, ke ungaphoswa ngunyaka omtsha eli nqaku libalaseleyo.